ခန္တီတရား၊ သည်းခံငြား၊ စိတ်ထားဘယ်သို့ဖြည့်သနည်း။
လူမိုက်အမှု၊ ငါပြန်ပြုလျှင်၊ သူလိုငါလည်း၊ လူမိုက်ပဲဟု၊ စိတ်ထဲတွေးဆ၊ အေးမြမြနှင့်၊ ဒေါသမထွက်၊ စိတ်မပျက်၊ သက်သက်အနာခံသတည်း။
“ငါ့အပေါ်၌ လူမိုက်ပြုသော စော်ကားမှုကို ငါကပြန်ပြုလျှင် ငါလည်းလူမိုက်ဖြစ်မှာပဲ” ဟု စိတ်ထဲမှာ တွေးဆ၍ ဒေါသမထွက်ဘဲ စိတ်ပျက်အားငယ်လို့လည်းမနေဘဲ၊ စိတ်အေးအေးနှင့် မိမိကသာ အနာခံလိုက်ခြင်း သည် ခန္တီပါရမီ၏ သဘောတည်း။ (အရှင်ဇနကာဘိဝံသ၊ ရုပ်စုံဗုဒ္ဓ၀င်အမေးအဖြေ စာမျက်နှာ-၂၆) ဟူသော စာပိုဒ်ပါ ဆရာတော်အရှင်ရာဇိန္ဒ (ရဝေနွယ်-အင်းမ)၏ “ခန္တီပါရမီ” ဘာသာရေးဆောင်းပါးအား ဖတ်ရှုမိစဉ် မိမိ၏ အတိတ် ကာလများဆီမှ ပုံရိပ်များကို ဖြိုးခနဲ ဖျတ်ခနဲ ပေါ်လာမိသည်။
အချိန်ကား ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ။ နေပူမိုးရွာထဲ ဖိနပ်မပါဘဲနှင့် လမ်းလျှောက်ကာ ရန်ကုန်မြို့တွင်း လှည့်လည်၍ မေတ္တာပို့သ ဆုတောင်းပေးနေကြသည့် ဗုဒ္ဓ၏သားတော် သံဃာတော်တို့အတွက် ဆွမ်းဘုန်းပေးရန် အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်နေ၍ ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်၏ အရှေ့ဘက်မုဒ်ဦး (ကြေးသွန်းဘုရားကြီး)တွင် ခေတ္တ ကြွရောက်သီတင်းသုံး နားနေကြစဉ် မိမိတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအနေဖြင့် ဆွမ်းဆက်ကပ်ရန်အတွက် အမျိုးဘာသာ သာသနာစိတ်များ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ မိမိတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များတင်မက သံဃာတော်များ၏ မေတ္တာတန်ခိုးကြောင့် အခြားသောဘာသာဝင်များကပါ ၀င်ရောက်လှူဒါန်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။
ထိုစဉ်အခါက မိမိသည် တိုင်းပြည်မငြိမ်သက်စေရန် ဆန္ဒမရှိ၊ နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှုကို ပြုလုပ်ခြင်းမရှိ၊ စီတန်းလှည့်လည် ဆန္ဒပြမှုတွင်လည်း ပါဝင်ခြင်းမရှိ၊ အော်ဟစ်တောင်းဆိုမှုများကိုမပြု . . . အဆုံးစွန်ပြောရသော် မိမိ၏ လက်နှစ်ဖက်ကို လက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီး အော်ဟစ်တောင်းဆိုမှုကို ပြုခြင်းမရှိဘဲ သံဃာတော်များအား ရိုသေ၀ပ်တွား လက်အုပ်မိုး၍ ထမင်းဗူး(ဆွမ်း)များကို ပခုံးအထက် လက်နှစ်ဖက်မမြှောက်ဘဲ (မကျော်ဘဲ) ရိုသေ ကိုင်းရှိုင်းစွာ ဆွမ်းကပ်ခဲ့သည်ကို ပရိသတ်ကြီးလည်း မြင်တွေ့ရမည်မှာမလွဲပေ။
သို့သော် . . . ဤသို့ ဆွမ်းဆက်ကပ်မှုကြီး၏ နောက်ဆက်တွဲဇာတ်လမ်းကား ပြည်ထဲရေးရုံးချုပ်၊ အောင်သပြေစစ်ကြောရေးစခန်းများဆီသို့ ဘ၀ပေးကုသိုလ်နှင့် ရောက်ခဲ့ရသည်။ မေးတဲ့သူက မေး၊ ဖြေတဲ့သူက ဖြေ၊ စစ်တဲ့သူက စစ်၊ ပြောတဲ့သူက ပြော . . . လိမ်ညာလို့မရ။ အမှန်အတိုင်း ထွက်ဆိုကြရသည်။ မိမိသည် မည်သည့်ပြစ်မှုကိုမှ မလုပ်ခဲ့ဟု ယုံကြည်မှုကြောင့်လည်းကောင်း၊ အနန္တော အနန္တဂုဏ်ကျေးဇူးကြောင့်၎င်း၊ သမာဒေ၀နတ်မြတ်အပေါင်း၏ မေတ္တာစွမ်းပကားတို့ကြောင့်၎င်း၊ ယင်းဋ္ဌာနကြီးများ၌ ရက်ရှည် နှစ်ရှည်မနေခဲ့ရ။ “ကိုယ်ပြုသောကံ ပဲ့တင်သံ ကိုယ့်ထံ ပြန်လာမည်”ဆိုတဲ့ စကားမှန်ပြီဟေ့ဟု ကြွေးကြော်မိတော့သည်။ ထိုဋ္ဌာနကြီးမှ မိမိ၏နေအိမ်သို့ ပြန်မည့်နေရက်တွင် ရဲမှူးကြီးမှ “ကဲ… ကိုကျော်သူ၊ ခင်ဗျားအိမ်ပြန်ရတော့မယ်၊ ခင်ဗျား ဒီကနေထွက်ပြီး အပြင်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့ အနုပညာလုပ်ငန်းနဲ့ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်တာကိုဘဲ မြင်ချင်ပါတယ်”တဲ့ဗျာ။ ဒါဘဲပေါ့ဗျာ… အမှန်တရားရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ အမှန်တရားဘဲရှိတယ်ဆိုတာ။
“(မင်း၊ ခင်ဗျား၊ ကိုမောင်၊ ကျော်သူ) ရုပ်ရှင်ရိုက်ခွင့်ပိတ်လိုက်ပြီ”တဲ့ဗျာ။ ကဲ... ဒါဆို “လူမိုက်အမှု၊ ငါပြန် ပြုလျှင်၊ သူလိုငါလည်း၊ လူမိုက်ပဲ” ဟုဆိုတဲ့စကားအရ ငါဟာလူမိုက်လား၊ သူဟာလူမိုက်လားဟု စဉ်းစားမိ တော့သည်။ “ငါက သံဃာတော်ကို ဆွမ်းဆက်ကပ်တာဘဲ လူမိုက်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါဆိုရင် ငါရဲ့အနုပညာ လုပ်ငန်းတွေကိုပိတ်တဲ့ ရုပ်ရှင် လုပ်ငန်းက လူမိုက်လား၊ မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးက လူမိုက်လား၊ ပြန်ကြားရေးဋ္ဌာနက လူမိုက်လား….” ဟု မိမိစိတ်မှာ ဒွိဟဖြစ်ခဲ့ရသည်။
သို့သော် . . . ငါးရာ့ငါးဆယ် သရဘင်္ဂဇာတ်တော်မှာ သရဘင်္ဂရသေ့က “လောကမှာ ဒေါသကို ပယ်သတ် လိုက်ရင် တစ်ရံတစ်ခါမျှ မစိုးရိမ်ရတော့ဘူး” လို့ဟောကြားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အသိတရား ၀င်လာမိတော့တယ်။ အဲဒီ သည်းခံခြင်းတရားသဘောကို မြင်တွေ့ခဲ့ပြီး “အော်… ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်း၊ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး၊ ပြန်ကြားရေးတို့တွေဟာ ငါ့ကို ခန္တီပါရမီ ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ လူတွေပါလား၊ အဖွဲ့အစည်းတွေပါလား”လို့ ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းလိုက်လို့ မိမိရင်ထဲ နှလုံးသားထဲမှာ သည်းခံခြင်းဆိုတဲ့ တရားအသိ၊ တရားအားတွေ ၀င်လာမိတော့တယ်။
အော်… ဒါဟာ ဖြစ်ချိန်တန် … ဖြစ်၊ ပျက်ချိန်တန် … ပျက်၊ ဘဘဦးသုခပြောတဲ့ “ဘ၀သံသရာ” ဆိုတာ ပါလား။ ကောင်းမှုပြုသော်လည်း ကောင်းကျိုးမပြု၊ မကောင်းမှုပြုသော်လည်း ကောင်းကျိုးကပြု။ ဒါဘ၀ အဆက်ဆက်က ပြုခဲ့တဲ့ မိမိရဲ့ကုသိုလ် အကုသိုလ်တွေနဲ့ဘဲ သက်ဆိုင်ပါလားဆိုတဲ့ မိမိပြုလုပ် ပေးဆပ်နေတဲ့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)နဲ့ နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ “အနိစ္စ” ဆိုတာကို မြင်တွေ့မိလိုက်ပါတော့တယ်။
ဒီလို “အနိစ္စ” ဆိုတဲ့ အသိတရားနဲ့အတူ မိမိ ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှစပြီး အများပြည်သူတို့အတွက် ကူညီဖေးမ ပေးဆပ်မှုတွေကို လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှာဘဲ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ကစပြီး ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ထဲထဲ ၀င်ဝင် နေ့မအား၊ ညမအား ပိတ်ရက် နားရက်မရှိဘဲ (အခမဲ့) ကူညီဖေးမမှုများဖြစ်သော နာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ သဘာဝဘေးဒဏ် (အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေး) စတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ် လုပ်ငန်းထဲတွင် ပေးဆပ်မှုများကို ခြေစုံပစ် ၀င်ရောက်၍ လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတော့တယ်။ မိမိနှင့်ပတ်သက် ဆက်နွယ်ခဲ့ဖူးသော ရုပ်ရှင်အနုပညာလောကကြီးထဲသို့ မိမိရဲ့ခြေလှမ်း လှမ်းဝင်ဖို့ပင် လုံးဝ မကြိုးစားခဲ့တော့ပေ။ လူ့လောကကြီးထဲ ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် (၃၁) ဘုံတွင် မည်သည့်ဘုံတွင်မှ မလုပ်နိုင်သော မရနိုင်သော ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုတော်ကြီးကို မိမိလက်မလွှတ်နိုင်တော့ချေ။
သို့သော် . . . မိမိသည် ဤနာရေးကူညီမှု၊ ဆေးဝါးကုသကူညီမှု၊ ပညာရေးကူညီဖေးမမှု၊ သဘာဝဘေး (အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေး) ကူညီဖေးမ လှူဒါန်းမှုတည်းဟူသော နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ ကုသိုလ် ကောင်းမှုတော်ကြီးကို ကူညီဖေးမ ပေးဆပ်ခဲ့မှုသည် (၁၁)နှစ်ပြည့်ရန် တစ်လအလိုအချိန်၌ မိမိအား စွန့်ပစ် ထားခဲ့သော၊ မိမိက စွန့်လွှတ်ခဲ့သော အနုပညာလောကကြီးထဲသို့ ပြန်ဝင်ရောက်ရန် အကြောင်းဖန်လာတော့သည်။
မိမိတို့ လေးစားကြည်ညို အားကျဂုဏ်ယူနေကြတဲ့ “အမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်”က မိမိတို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အထွဋ်အမြတ်ဖြစ်သူ အာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး “ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း”ရဲ့ အတ္ထုပတ္တိ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ရိုက်ကူး တော့မည်တဲ့။ အနုပညာအင်အားပေါင်းစုံ၊ ပြည်သူလူထုအင်အားပေါင်းစုံ၊ အစိုးရဋ္ဌာနများ၏ အကူအညီတို့နှင့် အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ် ပြည့်ဝစွာဖြင့် မြန်မာပြည်ရဲ့ အတ္ထုပတ္တိ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ အတ္ထုပတ္တိမော်ကွန်း မှတ်တိုင်ကို စိုက်ထူတော့မည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည်ဖွား ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်အနေဖြင့် မိမိ ကျင်လည်လှုပ်ရှားရာ လူမှုရေးနယ်ပယ်မှ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့် ကျေးဇူးတင် ဂုဏ်ယူမုဒိတာပွားနေမိ တော့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ရုပ်ရှင်အနုပညာသည်များနှင့် တွေ့ဆုံကြမည့် (၃.၁၂.၂၀၁၁) ရက်နေ့တွင် မိမိအား လာရောက်ရန် အကြောင်းကြားခဲ့သည့်အတွက် မိမိသွားရောက်ခဲ့သည်။ (၄)နှစ်တာ ကာလဝေးကွာခဲ့သော အနုပညာမောင်နှမများနှင့် ပြန်လည်ဆုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ အားလုံး၏မျက်လုံးများသည် ချစ်ခင်လေးစား ကြည်ညို ကြသော အမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား တွေ့ဆုံခွင့်ရ၍ တောက်ပ၀င်းလက်နေကြသည်ကို မြင်တွေ့ရမိသည်။ အမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ဆန္ဒကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် အားလုံးသဘောတူညီ၍ ဇာတ်ကားရိုက်ကူးမှုကို စတင်နိုင်ရန်အတွက် ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းကြသည်ကို နောက်မှ မိမိသိရသည်။ သို့သော်… မိမိထံသို့မည်သူမျှ အကြောင်းကြား အသိပေးခြင်းမရှိခဲ့ချေ။ မည်သို့ရှိစေ… မိမိဝမ်းမြောက်ကြည်နှုးမိသည်။ အနုပညာလောကသားများအတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက် မုဒိတာပွားနိုင်ခဲ့သည်။ ယခုဖော်ထုတ်ကြမည့် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကား မြန်မာ့သမိုင်း၊ မြန်မာ့အတ္ထုပတ္တိ၊ မြန်မာ့ရာဇ၀င်၊ မြန်မာ့မော်ကွန်း၊ မြန်မာအာဇာနည်ဟူ၍ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူသားများအားလုံး မျက်စိထောင့်ထောက်ကြည့်ကြမည့် ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ အမျိုးသားရေးကိစ္စ ဖြစ်တော့သည် မဟုတ်ပါလား။
(၂၀.၁၂.၂၀၁၁) ရက်နေ့တွင် မိမိထံသို့ထပ်မံ၍သတင်းပို့လာသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ တွေ့လိုသည် ဟု ချိန်းဆိုသည့်အတွက် မိမိသွားရောက်ခဲ့သည်။ အမေကပြောသည် “ယခု ‘ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း’ ဇာတ်ကားမှာ သား, ပါရမယ်၊ သား,ကိုပါ အမေတာဝန်ပေးတယ်… ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်နဲ့ ….” ဟု။ မိမိမည်သို့မျှ ပြန်လည် ပြောရန် အင်အားမရှိတော့ချေ။ အမေနေအိမ် အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်မြောက်ခဲ့သည့် နေ့ရက်က အမေ့ဆီ မိမိတစ်ဦးတည်း သွားရောက်တွေ့ဆုံ ဂါရ၀ပြုခဲ့သည်။ အဲဒီနေ့ အဲဒီအချိန်မှာ မိမိက အမေ့အား “အမေ … တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက် အမေပေးတဲ့တာဝန်တွေကို သား ထမ်းဆောင်ပေးဆပ်ပါ့မယ်”ဟု ပြောကြားခဲ့ဖူးသည်။ အမှန်မှာ.... “အမေရေ၊ သား ဒီအနုပညာအလုပ်ကို ပြန်မလုပ် ပါရစေနဲ့တော့၊ သားရဲ့လူမှုရေးလုပ်ငန်းမှာ စိတ် သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနဲ့ သီလလုံခြုံစွာ ကုသိုလ်ရေးအတွက်ဘဲ ငြိမ်းချမ်းစွာ လုပ်ပါရစေတော့” ဟုပြောဆိုသင့်သည် မဟုတ်ပါလား။ သို့သော် အမေသည် မိမိ၏ သူရဲကောင်းကြီးဖြစ်သည်။ အမေ့ကိုလေးစားသည်၊ ချစ်ခင်သည်၊ ကြည်ညိုသည်။ အမေသည် အမှန်စင်စစ် လူမှုရေးသူရဲကောင်းတစ်ဦးဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လူမှုရေး သမားတို့မည်သည် စွန့်လွှတ်မှု၊ အနစ်နာခံမှု၊ စွန့်စားမှု၊ ပေးဆပ်မှု၊ ငြိမ်းချမ်းမှု၊ ဖေးမမှု၊ ကူညီမှုစသည့် ဂုဏ်ပုဒ်များ ရှိဖို့လိုသည်။ အမေ့မှာ ယင်းဂုဏ်ပုဒ်များထက်မကသော ဂုဏ်ပုဒ်ကြီးများ၊ စွမ်းအားများ၊ ပါဝါများရှိသည် မဟုတ်ပါလား။ ထို့ကြောင့်အမေ့ရဲ့ “သားကိုတာဝန်ပေးတာ” ဟူသော စကားရပ်ကို မိမိ မလွန်ဆန် ၀င့်တော့ပေ။
ထို့ကြောင့်… မိမိအား ဘကြီးမိုး(ဦးမိုးသူ)၊ ညီမငယ် ဒါရိုက်တာ-ကြည်ဖြူသျှင်နှင့် ညီငယ် ဒါရိုက်တာဝိုင်းတို့မှ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ရိုက်ကူးအကောင်အထည်ဖော်ကြမည့် အဖွဲ့တွင် ဒု-ဥက္ကဋ္ဌနေရာမှ ဆောင်ရွက်ပေးရန် ပြောဆိုလာသည်။ ထပ်မံ၍ (၂၃.၁၁.၂၀၁၁) ရက်နေ့တွင်လည်း ကြီးလေးသောတာဝန်များ၊ ၀တ္တရားများအားထပ်မံ၍ ထမ်းဆောင်ပေးရန် အဓိကနေရာများတွင် မိမိအားထည့်သွင်းရန် စီစဉ်ကြပြန်သည်။ မိမိပြန်လည်၍ ပြောကြားခဲ့ရသည်။ “အလုပ်တစ်ခု လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာ စည်းစနစ်ကျဖို့လိုတယ်၊ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပြီးရင် လူစုံအစည်းအဝေး လုပ်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အတည်ပြုရတယ်၊ အများသဘောတူတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ရမယ်” ဟု မိမိတတ်သလောက် မှတ်သလောက် ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့သည်။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်…. မိမိ ဈေးကိုင်ခြင်းမဟုတ်။ မိမိနှင့် ရုပ်ရှင်လောကပတ်သက်မှု မရှိတော့ပါ။ မိမိ ပါဝင် လာမှုအား မကြိုက်သည့်သူ၊ မနှစ်မြို့တဲ့သူတွေသည်လည်း ရှိနေသည်မဟုတ်ပါလား။
“သား… လူများအတင်းပြောတာ၊ အပုပ်ချတာတွေကို ဂရုမစိုက်နဲ့၊ ကိုယ်လုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းကို ကိုယ်လုပ်” တဲ့။
“အမေဆိုရင် အတင်းပြောတာ၊ အပုပ်ချ၊ အပြစ်ပြောခံရတာ အများဆုံးသော နိုင်ငံရေးလောကထဲမှာ နေရတာ၊ သေကြောင်းကြံတဲ့သူရှိသလို၊ နှင်းဆီပန်းပွင့်လေးတွေ လာပေးတဲ့သူလည်း ရှိတာဘဲလေ။ ဒါပေမယ့် အမေအားလုံးနဲ့ လက်တွဲနိုင်တယ်။ လောကကြီးကို ဒီလိုဘဲ တည်ဆောက်ရမယ်၊ ဒီလိုဘဲ ရင်ဆိုင်ရမယ်” တဲ့။
ဟုတ်ပါတယ်အမေ။ ဒါပေမယ့် ယခု အနုပညာသည်တွေ တည်ထောင်ကြမယ့် မြန်မာ့သမိုင်း မှတ်တိုင်ကြီး အတွက် သားဟာ အနှောင့်အယှက် မဖြစ်လိုပါဘူးအမေ။ အမေပေးတဲ့တာဝန်ကို သား ကျေပွန်ချင်ပါတယ်အမေ။ သမိုင်းမှတ်တိုင် စိုက်ထူတဲ့ လုပ်ငန်းကြီးမှာ သားလည်း ပါဝင်ချင်တာပေါ့အမေ။ သားနည်းတူ အနုပညာသည်တိုင်း မြန်မာပြည်သူလူထု အားလုံး တစ်ယောက်မကျန် ပါဝင်ချင်ကြပါတယ်အမေ။
ဒီလို မြန်မာ့သမိုင်းမှတ်တိုင်ကြီးကို ဖော်ကျူးကြတဲ့နေရာမှာ ပါဝင်ကြတဲ့ အနုပညာရှင်တွေအားလုံးဟာ နေရာကအဓိကမဟုတ်၊ မိမိတို့ပေးဆပ်မှု၊ အနစ်နာခံမှု၊ စိတ်ဓါတ်ခွန်အား၊ လူမှုခွန်အားများသာအဓိကဟု ပြောလိုပါတယ်။ ပါဝင်သူအချင်းချင်းသော်၎င်း၊ မပါဝင်ဘဲဘေးမှနေ၍၄င်း၊ အတင်းအဖျင်း၊ ဝေဖန်၊ ဘုပြော၊ ပုတ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုတွေ လုပ်နေကြတာဟာ အကုသိုလ်တွေ သယ်ဆောင်နေကြတယ်လို့ အသိတရားလေးများ ရကြ စေချင်တယ်။
ယခု ဖော်ကျူးဖန်တီးကြမည့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှ ရရှိမည့် အကျိုးအမြတ်များကို မြန်မာ ပြည်တွင်းရှိ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး စတဲ့ကဏ္ဍများကို လှူဒါန်းမှုပြုမယ်လို့ အမေ ပြောကြားထားသည့် အတွက် အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ်ကို ဖော်ကျူးမည့် သမိုင်းအတ္တုပ္ပတ္တိ ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်သလို ဘာသာ သာသ နာအတွက် သာသနာပြုမည့် လုပ်ငန်းကြီးတစ်ရပ်ဟု မြင်တွေ့မိပါတယ်။
ဒါကြောင့် နိုင်ငံရေးဘဲလုပ်လုပ်၊ စီးပွားရေးဘဲလုပ်လုပ်၊ ပညာရေးဘဲလုပ်လုပ်၊ ကျန်းမာရေးဘဲလုပ်လုပ်၊ လူမှုရေးဘဲ လုပ်လုပ်၊ ယခုကဲ့သို့ အမျိုးသားရေးကို ဖော်ထုတ်ကြမယ့် သမိုင်းပေးတာဝန်ကို ထမ်းရွက်ကြမယ့် အနုပညာအလုပ်ကိုဘဲ လုပ်လုပ် ပေးဆပ်ကြမည့်သူတိုင်း သီလ၊ သမာဓိလုံခြုံစွာဖြင့် စည်းလုံးညီညွတ်ကြပြီး မိမိတို့ရဲ့ အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကို မမေ့မလျော့သော သစ္စာအဓိဋ္ဌာန် ဆုံးဖြတ်ချက်တည်းဟူသော ပါရမီ (၁၀)ပါးတို့ဖြင့် မေတ္တာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပေက္ခာ ဗြဟ္မစိုရ်တရားလေးပါး ပွားများပြီး ပညာဥာဏ်ကိုသုံးကာ မိမိတို့ရည်ရွယ်သော လုပ်ငန်းကို အောင်မြင်ပြီးမြောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ကြဖို့သာ အရေးကြီးပါကြောင်း ပါဝင်ကြမည့် အနုပညာရှင်များ၊ အများပြည်သူလူထုများအားလုံးကို တပ်လှန့်နှိုးဆော် လိုက်ရပါတော့သည်။
(ကိုကျော်သူ ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာမှ ကူးယူဖော်ပြသည်။)
Posted by ကိုဈာန် at 6:49 PM